On jan 20, 2020 17 357
Notanterahina teny amin’ny lapan’Iavoloha, androany maraina ny fifampiarahabana tratry ny taona, teo amin’ny Filoham-pirenena Rajoelina Andry sy ny mpanao gazety eto Antananarivo. Nisy ny fifampirariana soa avy amin’ny andaniny sy ny ankilany. Ny filohan’ny holafitry ny mpanao gazety, Rakotonirina Gérard, no nitondra teny, nisolontena ny mpiara-miasa rehetra manerana ny nosy.
Tetsy Ankilan’izay, nanome toky ny Filoham-pirenena, fa hanome lanja misimisy kokoa hatrany ny mpanao gazety. Hisokatra bebe kokoa ny fampitam-baovao sy ny fifaneraserana, hoy izy. » Hisy isam-bolana ny tafa ho an’ny mpanao gazety, hisy koa ny fandaharana manokana, ifampizarana vaovao amin’ny vahoaka malagasy », hoy hatrany izy. Ny Filoham-pirenena izay nanamafy ny finiavany, hiaro ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara.
Nandritra ity, fihaonana ity ihany koa anefa no nanaovan’ny Filoha Rajoelina Andry, tatitra tamin’ny zava-bita sy ny tetikasa isan-karazany nampanantenainy tamin’ny fampielezan-kevitra. Nisantarany ny resaka, ny fanovana ny mpikambana ao amin’ny governemanta. » Misy ny minisitra tena niasa, misy ireo tsy naharaka ny lamina napetraka ary tsy nahatratra ny tanjona. Tsy azo iodivirana ny fanovana mba tsy hamitahana ny vahoaka malagasy, izay nitaky asa aingana tamin’ny mpitondra », hoy izy.
Mikasika ny tetikasa IEM kosa, nanambara ny filoha tamin’ny valim-panontaniana nataon’ny mpanao gazety fa misy ny vola ho enti-manana amin’izany. Anisan’ireny ny volantsika malagasy madiodio, azo sintonina amin’ireo orinasa miankina amin’ny fanjakana toy ny Cnaps. Ity farany izay manana tahiry, hatrany amin’ny 300 miliara ariary, hoy izy. Ampy tsara ireny, ho entina manatanteraka tetikasa. Ohatra noraisiny ny fananganana ireo trano lehibe, izay mitentina 1 miliara ariary ny iray. » Marina fa misy ny tetikasa izay ilantsika ny fiaraha-miasa amin’ny mpamatsy vola, saingy, misy koa ny azontsika zakaina avy hatrany », hoy hatrany izy.
Ankoatra ireo teboka roa ireo, mikasika ny fananganana ny tanana vaovao sy maoderina na ny Tetikasa Tanamasoandro. Nilaza Atoa Rajoelina Andry, fa tsy maintsy hirosoana izany. » Tsy maintsy manorina tanana vaovao isika, efa iaraha-mahalala ny fahasemporana eto an-drenivohitra. Olona 300000 no mponina teto Antananarivo tany am-piandohana, saingy efa mahatratra 3 tapitrisa mahery isika no mponina eto ankehitriny », hoy izy. Nanafamafy ny Filoham-pirenena, fa haverina ny fifampiraharahana amin’ny mponina eny Ambohitrimanjaka, mba ahafahana manantanteraka izany. Izy tenany mihitsy no hitarika ny fifampiraharahana.
Ankoatra izay, voateny nandritra ny fihaonana ny fanotofana ny tany, eto an-drenivohitra, izay itondran’ny mponina fanankianana. Nanome baiko ny eo anivon’ny kaominina Antananarivo renivohitra izy, miaraka amin’ny minisiteran’ny fanajariana ny tany mba hijery akaiky azy ireny. Ankoatra izay, manome vola 10 miliara ariary ny kaominina Antananarivo Renivohitra, ny Filoham-pirenena mba hanatanterahana ny tetikasam-pampandrosoana ny renivohitra sy ny fanadiovana ny tanana.
Voaresaka nandritra ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety koa anefa, ny mikasika ny tetikasa » Bas Mangoky », izay voalaza fa lasan’ny Arabo. Nanazava ny Filoha Rajoelina Andry, fa madio ary tena mpisitraka mivantana ny vokatra vary azo avy ao an-toerana ny vahoaka malagasy. Hahafahana mifehy ny vidin’ny vary izany, no afaka ihany koa ahatrarantsika ny tanjona amin’ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Notsiahiviny ihany koa ny momba ny fisondrotan-karama 13% , izay nambarany fa fanomezana avy aminy ho an’ny mpiasam-panjakana rehetra.
FAMBOLEN-KAZO TAONA 2020: ZANA-KAZO MIISA 60 TAPITRISA NO EZAHANA VOLENA MANERANA NY NOSY